Phupha ngencasa Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Iphupha malunga nencasa. Sisoloko sizibuza ukuba zezantoni? Iyintoni intsingiselo yayo? Ukusuka kwizithandi zobulumko ukuya kwezenzululwazi baphande ngentsingiselo yamaphupha. Namhlanje kuyaziwa ukuba banakho ukutyhila okuthile ngathi kwaye nokwazi indlela yokubaqonda ngayo kunokusinceda. Apha unokufumana ulwazi oluncedo ngakumbi ngalo mbandela.
Wonke umntu unengqondo yakhe yokunambitha. Into esele inongwe kakhulu okanye enetyiwa komnye umntu inokuba yinto yesiqhelo ngokupheleleyo okanye ide ibe krwada komnye. Nangona kunjalo, yonke into el mundo uyavuma ukuba, umzekelo, ilamuni imuncu kwaye ityhubhu yeswekile imnandi. I-gourmet inokuba nayo incasa emnandi kakhulu edlula ulwimi olungenamava.
Nangona kunjalo, umxholo wokungcamla awunakubhekisa kukutya okanye ukusela. Ngengqondo yokomfuziselo, "ukuthanda incasa elungileyo" kunokubonisa ukuzithemba kwesitayile kwifashoni okanye kwezinye izinto.
Ukutolikwa kwephupha ukwahlula phakathi kwala manqanaba mabini xa utolika "incasa" yomfanekiso wephupha. Ke ngoko, xa ulitolika, umntu kufuneka aqwalasele ngononophelo ukuba liphupha lini na.
1 Uphawu lwephupha «incasa» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «incasa» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «incasa» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «incasa» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, konke okunokubonakaliswa kwisimboli yamaphupha «incasa». Ukutyekela yomntu oleleyo. Kwilizwe elivukayo, ungawuchaza umahluko phakathi kwento oyithandayo kunye naleyo ungayithandiyo. Ukuba into ephupheni ayisiyeyona incasa yokuphupha, ayihambelani neenqobo zakho kunye neenjongo zakho. Ukuba umntu uyazi ephupheni ukuba indawo ezikuyo "zinencasa elungileyo", oku kunokuba luphawu lokuba uyazithanda izinto ezintle.
Incasa emnandi emlonyeni okanye kulwimi ephupheni, efana naleyo yesosi emnandi, ubukhulu becala ibhekisa kubuninzi be amathuba ebomini bomphuphi. Kuya kufuneka uyazi ukuba uzisebenzisa njani. Incasa engathandekiyo njengophawu lwephupha, njengeoyile ye-castor, inokubonisa ukuba ulandela iinkolelo zobuxoki okanye iimfuno kwilizwe elivukayo. Nabani na onandipha ivumba elimnandi okanye isipha sewayini ephupheni unekamva eliqinisekileyo kunye namaxesha amyoli angaphambili.
Ngokunxulumene nesimboli yephupha "incasa", ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kukwakhuthaza ukuthathela ingqalelo into ebangela incasa elungileyo okanye embi. Kukuphi ukutya okubonileyo ephupheni lakho? Ngaba yayisisiqhamo okanye amaqunube amnyama, njengebhanana, okanye isoseji netshizi? Mhlawumbi nawe utye itheniphu?
Incasa inokudibanisa izinto ezingaphezulu. Ngaba ukutya kwakuswiti okanye kunetyuwa? Mhlawumbi umxube ongaqhelekanga okrakra njengequince okanye irharnate? Okanye ngaba kwakuthethwe ngendlela eyahlukileyo yokungcamla? Ngaba unayo iilekese, okanye ilollipop? I-Mustard ikwanayo incasa yayo, ngamanye amaxesha iziqholo, ngamanye amaxesha ithambile.
Nabani na obonisa incasa elungileyo empahleni okanye kwifashoni ephupheni unaye umfanekiso wakho ebomini. Kwelinye icala, ubuhle bemeko ephupheni bubonisa ukuba awuxolanga nesiqu sakho.
Uphawu lwephupha «incasa» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, umfanekiso wephupha "unokungcamla", ngakumbi ukuba kulungile. Uyayazi into oyithandayo kwaye uyazi ezakho izimvo. Ephupheni, nangona kunjalo, le migangatho inokubhideka. Oku kunokuzibonakalisa kwinto yokuba umntu ophuphayo ngequbuliso uthanda izinto okanye imibala engonelisiyo kwiminqweno yakhe.
Ukuba uyayithanda incasa yezitya ezithile ephupheni lakho kwaye uyonwabile ngezi zinto zonwabisayo zokupheka, njengemacaroni kunye netshizi, wanelisekile bubomi bakho. Nangona kunjalo, ukuba isitya asinaso isinongo xa ulele, oku kubonisa ukungoneliseki.
Ukuba imajarini inencasa engcono kunebhotolo ephupheni lakho, kuya kufuneka uzame ukubeka imicimbi yakho ukuze uzilungiselele nangamaxesha okusilela. Ukuba kukho into oyithandayo njenge-mint ephupheni, unganentlanganiso enobuntu obunomtsalane.
Uphawu lwephupha «incasa» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha "incasa" inokukhokelela umphuphi kokungakumbi ukuqonda kunye nolwazi olukhawulezayo. Kuba ngale ndlela ufunda ukuxabisa ezona zinto zintle kwaye zintle kwinqanaba lokomoya.
Epreli 10, 2021